Translate Hungarian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Hungarian to Myanmar (Burmese), Hungarian to Myanmar (Burmese) translations, Hungarian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Helló, hogy vagy မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Van valaki? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Nagyon szeretlek téged ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Mennyibe kerül ezahamburger? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Tudsz taxit hívni? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
A járatom késett အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Itt vagyok az üzletért ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Helló az én nevem မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Sajnálom, de házas vagyok ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Meg szeretném kérdezni ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Elviszelarepülőtérre? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Mi az ideje most, kérlek? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Hol vanalegközelebbi rendőrség? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Felvehetematelefon töltőjét? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Tudsz segíteni nekem? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Rendeljen nekem egy italt, kérem? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Mennyibe kerül? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Allergiás vagyokagluténre ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Hívja az orvost ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Van orvos? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Kérem, hívjaafőnököt. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Ezahely nagyon szép ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Vigyélaszállodába, kérlek ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Miaszobám száma? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?